आज शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन, हिलारी र ट्रम्पबीच कडा टक्कर - Radio Tribeni FM
आज शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन, हिलारी र ट्रम्पबीच कडा टक्कर
२३ कात्तिक -आज मंगलबार ४५ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ। सन् १८४५ मा सुरु भएको प्रचलनअनुसार नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गर्दछ।
३३ राज्यसहित डिस्ट्रिक अफ कोलम्बियामा पहिले नै मतदान सुरु भएको र झन्डै ४ करोडले मतदान गरिसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्। निर्वाचनको दिन मंगलबार थप आठ करोडले मतदान गर्ने अपेक्षा छ । दुई ठूला पार्टीअन्तर्गत डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट पूर्वविदेशमन्त्री ६९ वर्षीया हिलारी रोदम क्लिन्टन र रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार ‘रियलस्टेट बिलिनियर’ ७० वर्षीय डोनाल्ड जोन ट्रम्पबीच राष्ट्रपतिका लागि निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत विभिन्न मत सर्वेक्षणले देखाएका छन्।
थर्ड पार्टी’ अन्तर्गत लिवर्टरियन पार्टीका तर्फबाट न्यु मेक्सिको राज्यका पूर्वरिपब्लिकन गभर्नर गेरी जोन्सन एवं ग्रीन पार्टीका तर्फ बाट डा. जिल स्टिन पनि ‘ह्वाइट हाउस’ प्रतिस्पर्धामा छन् ।
अन्तिम घडीमा दुवै उम्मेदवारले आफ्ना एजेन्डासहित प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिए । यस पटकका उम्मेदवार क्लिन्टन र ट्रम्पबीच नीति एवं कार्यक्रममा ठूलै भिन्नता रहे पनि प्रचारमा व्यक्तिगत आरोप र प्रत्यारोपले ज्यादा स्थान पाएको छ । विभिन्न चुनावी सर्वेक्षणले दुवै प्रमुख उम्मेदवार अलोकप्रिय भएको संकेत गरेको छ। विदेशमन्त्रीको कार्यकालमा क्लिन्टनको इमेल प्रकरण र क्लिन्टन फाउन्डेसनको क्रियाकलाप र पारदर्शितामाथि रिपब्लिकनले निसाना साधेका छन् भने महिलामाथिको दुव्र्यवहारलगायत मुस्लिम, अल्पसंख्यकमाथिका विवादास्पद टिप्पणी र कर विवरण सार्वजनिक नगरेको गम्भीर आरोप ट्रम्पमाथि छ।
आइतबार संघीय जाँच ब्युरो (एफबीआई) ले क्लिन्टनका पछिल्ला इमेलबारे कुनै आरोप नलगाउने जानकारी अमेरिकी कंग्रेसलाई दिएको छ । यसले क्लिन्टनको अभियानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गत साताको शुक्रबार एफबीआईले क्लिन्टनको पछिल्ला इमेलबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै सर्वेक्षणमा अग्रता लिइरहेकी डेमोक्रेटिक उम्मेदवार र रिपब्लिकन प्रत्याशीबीच कडा टक्कर हुने संकेत देखिएको थियो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुल ५ सय ३८ इलेक्ट्रोरल मतमध्ये बहुमत संख्या अर्थात् २ सय ७० मत आवश्यक पर्छ ।
अमेरिकी तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेन्जिेटिभ्स’ को ४ सय ३५, माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ को संख्या १ सय एवं ‘डिस्ट्रिक अफ कोलम्बिया’ को ३ इलेक्ट्रोरल मतको आधारमा इलेक्ट्रोरल मतको समीकरण संख्या ५ सय ३८ तय गरिएको हो । जनसंख्या अर्थात् कंग्रेसमा हरेक राज्यको प्रतिनिधित्वको आधारमा राज्यको इलेक्ट्रोरल मत निर्धारण गरिएको हुुन्छ । उदाहरणका लागि क्यालिफोर्नियामा सबैभन्दा धेरै ५५ इलेक्ट्रोरल मत छ भने टेक्सासमा ३४, न्युयोर्कमा ३१, फ्लोरिडामा २७ र पेन्सलभेनियामा २१ इलेक्ट्रोरल मत छ ।
हरेक राज्यमा खसेको बहुमत मत जसको पक्षमा गयो त्यही उम्मेदवारले उक्त राज्यको सम्पूर्ण इलेक्ट्रोरल मत पाउने गर्छ । दुई राज्य मेन र नेब्रास्कामा भने मतको समानुपातिक आधारमा इलेक्ट्रोरल मत पाउने नियम छ । दुवै उम्मेदवारको इलेक्ट्रोरल भोट बराबर भए, तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेन्जिेटिभ्स’ लाई निर्वाचनको निर्णय गर्ने अधिकार छ । पचासै राज्यको कुल मत अर्थात् लोकप्रिय मतले निर्वाचनको निर्णय भने गर्न सक्दैन । सन् २००० को निर्वाचनमा डेमोक्रयाटिम प्रत्याशी एल गोरले लोकप्रिय मत धेरै पाए पनि इलेक्ट्रोरल मतका आधारमा जर्ज डब्लू बुससँग पराजित भएका थिए।
अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरोले निर्वाचनको ११ दिनअघि पुनः छानबिन थालेको इमेल दुरुपयोग काण्डमा डेमोक्र्याट उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई दोस्रोपल्ट सफाइ दिएपछि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाउने सम्भावना प्रबल बन्न पुगेको छ।
एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमीले निर्वाचनको अघिल्लो दिन हिलारी क्लिन्टनलाई इमेल काण्डमा सफाइ दिएपछि उनका बाँकी सारा अवरोध चिरिएका छन्। यसै पनि रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बन्न सजिलो थिएन।
निर्णायक भनिएका सबै राज्यहरू रिपब्लिकनका पक्षमा गएमात्र ट्रम्पका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेश सम्भव हुनेछ, जुन लगभग असम्भव छ । ‘ट्रम्पले जित्न असम्भव छ । यसका लागि उनले सबै स्विङु राज्यमा विजय प्राप्त गर्नुपर्नेछ, थुप्रै मत सर्वेक्षण गरिसकेका स्पेन्सर किम्बल भन्छन् ।
परम्परागत रूपमा मध्यअमेरिकाका धेरैैसहित आधाजसो राज्य रिपब्लिकनका पक्षमा तथा पूर्वी र पश्चिमी तटका अधिकांश राज्य डेमोक्र्याटका पक्षमा छन् । केही यस्ता राज्य छन् जसले हरेक निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका खेल्छन् । अब ह्वाइट हाउस प्रवेशका लागि ट्रम्पले सन् २०१२ मा रिपब्लिकन उम्मेदवार मिट रोम्नीले जितेका दुई राज्य नर्थ क्यारोलिना १५ प्रतिनिधि र एरिजोना ११ जित्नुपर्छ ।
दुवै राष्ट्रपतीय उम्मेदवारका लागि महत्वपूर्ण रहेको आयोवा ६ र ओहायो १८ ट्रम्प एक्लैले जित्नुपर्छ । त्यस्तै, अमेरिकामै तेस्रो सबैभन्दा बढी इलेक्टोरल कलेज सदस्य भएको फ्लोरिडा २९ पनि ट्रम्पले आफ्नो कब्जामा पार्नुपर्छ। पहिलो सबैभन्दा बढी इलेक्टोरल सदस्य रहेको क्यालिफोर्निया ५५ डेमोक्र्याटको परम्परागत अखडा हो भने दोस्रोे सबैभन्दा बढी इलेक्टोरल सदस्य रहेको टेक्सस ३८ रिपब्लिकनको पक्षमा जाने गरेको छ।
ह्वाइट हाउस प्रवेशका लागि ट्रम्पले धेरै इलेक्टोरल कलेज सदस्य भएका मिसिगन १६ वा पेन्सल्भिनिया २० मध्ये कमसेकम एउटा राज्य आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ। ट्रम्पले यस्तो असम्भव र दुर्लभ विजय हासिल गर्लान् भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? किम्बल उल्टै प्रश्न गर्छन्।
अमेरिकाका ५० राज्यका कुल ५३८ इलेक्टोरल मतमध्ये २५२ स्प्ष्ट रूपमा क्लिन्टनका पक्षमा देखिएको छ भने ट्रम्पका पक्षमा १६३ इलेक्टोरल मत छ। फ्लोरिडा, नर्थ क्यारोलिना, एरिजोना, ओहायो, न्यू ह्याम्सायरलगायत राज्यका १२३ इलेक्टोरल मत अझै अनिर्णीत छन् । निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्मका सर्वेक्षणअनुसार पनि अनिर्णीत देखाएका यी राज्यको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति चयनमा निर्णायक बन्नेछन्।
क्लिन्टनको पक्का समर्थक सीएनएनको पछिल्लो सर्वेक्षणले भने उनका पक्षमा अहिलेसम्म २६८ इलेक्टोरल मत स्पष्टै देखिएको उल्लेख गरेको छ भने २०२ मत ट्रम्पका पक्षमा देखाएको छ। ६८ मत भने अझैै अनिर्णीत देखिएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन् २७० इलेक्टोरल मत चाहिन्छ।
दुवै उम्मेदवारहरू निर्वाचनको साँझ न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा देखा पर्नेछन्। अबको केही घन्टामा यी दुई उम्मेदवारमध्ये एकले टाइम्स स्क्वायरमा विजय भाषण गर्नेछन् भने अर्काले पराजय भाषण। ‘निर्वाचनमा हारेपछि आफ्नो पराजय स्वीकारका साथ गरिने भाषण अमेरिकी इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण परम्परा हो, अमेरिकी सञ्चारविज्ञ प्राध्यापक ग्रेगोरी पेन भन्छन्, यो हाम्रो प्रजातन्त्रको एउटा आकर्षक पक्ष हो।
क्लिन्टन र ट्रम्पको सम्बोधनका लागि टाइम्स स्क्वायर केही दिनअघिदेखि नै झकिझकाउ पारिएको छ। संसारका सबै प्रमुख सञ्चारगृहले यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न स्टुडियो बनाएका छन्। यसै चम्किलो देखिने टाइम्स स्क्वायर निर्वाचन परिणामपछिको सम्बोधन तयारीसँगै क्लिन्टन र ट्रम्पका ठूल्ठूला तस्बिर र टीभीका खुला स्टुडियोले झनै आकर्षक बनाइएको छ।
चार महिनाअघि बन्द भइसकेको इमेल काण्डको फाइल निर्वाचनको ११ दिनअघि फेरि खोल्ने र एक दिनअघि त्यसमा क्लिन्टनलाई सफाइ दिने एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमीको निर्णयको भने डेमोक्र्याटका विपक्षीहरू र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्। कोमीले आइतबार अमेरिकी कांग्रेसलाई एक पत्र पठाई इमेल काण्डमा क्लिन्टनलाई सजाय दिनुपर्ने कुनै आधार नरहेको जानकारी गराएका थिए।